Wepụ iche email ọkachamara site na leta
Edere site Tranquillus | Nov 18, 2021 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ozi Ọkachamara na Ozi Ozi: Kedu ihe dị iche?
N'etiti email ọkachamara na leta, enwere isi ihe abụọ myirịta. A ga-emerịrị ederede n'ụdị ọkachamara na iwu nke mkpoputa na ụtọ asụsụ. Mana ihe odide abụọ a adabaghị n'ihe niile ahụ. Enwere ọdịiche dị ma n'usoro nhazi na usoro nkwanye ùgwù. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ụlọ ọrụ na-achọsi ike ịkwalite ogo ederede ọkachamara gị, ị bịarutela ebe kwesịrị ekwesị.
Email maka nkesa ngwa ngwa yana ịdị mfe karịa
Email eguzobewo onwe ya kemgbe ọtụtụ afọ dị ka ngwá ọrụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Ọ na-adabara ọtụtụ ọnọdụ ọkachamara, n'ihe gbasara mgbanwe ozi ma ọ bụ akwụkwọ.
Na mgbakwunye, enwere ike ịlele email na mgbasa ozi dị iche iche. Ndị a gụnyere kọmputa, smartphone ma ọ bụ mbadamba.
Agbanyeghị, akwụkwọ ozi ọkachamara, ọ bụrụgodị na ọ naghị ejikarị ya eme ihe, a na-ewere ya dị ka ihe na-eme nke ọma na mmekọrịta gọọmentị.
Akwụkwọ ozi na email ọkachamara: ọdịiche dị na ụdị
Tụnyere e-mail ma ọ bụ ọkachamara e-mail, e ji akwụkwọ ozi a mara site n'usoro iwu na nhazi. Dị ka akụkụ nke akwụkwọ ozi, anyị nwere ike ịkọwa aha aha obodo, ihe ncheta nke ihe na-akpali leta ahụ, nkwubi okwu, usoro nkwanye ùgwù, yana nrụtụ aka nke onye na-aza ajụjụ na onye zitere ya.
N'aka nke ọzọ na email, nkwubi okwu adịghị adị. Banyere okwu nkwanye ugwu, ha na-adịkarị mkpụmkpụ. Anyị na-ezutekarị okwu nke nkwanye ùgwù nke ụdị "Ekele" ma ọ bụ "Ekele" nwere ụdị dị iche iche, n'adịghị ka ndị ahụ dị n'akwụkwọ ozi nke dị ogologo oge.
GỤỌ Okwu ọma ịzenarị na email ọkachamara
Ọzọkwa, na email ọkachamara, ahịrịokwu ndị ahụ dị nkenke. Ọdịdị ahụ abụghị otu ihe dị n'akwụkwọ ozi ma ọ bụ akwụkwọ ozi.
Ọdịdị nke ozi ịntanetị ọkachamara na akwụkwọ ozi
A na-ahazi ọtụtụ mkpụrụedemede ndị ọkachamara gburugburu paragraf atọ. Paragraf nke mbụ bụ ihe ncheta nke oge gara aga, nke abụọ na-enyocha ọnọdụ dị ugbu a ma nke atọ na-atụ aro maka ọdịnihu. Mgbe paragraf atọ ndị a gachara soro usoro mmechi na usoro nkwanye ugwu.
Banyere ozi ịntanetị ọkachamara, a na-ahazikwa ha n'akụkụ atọ.
Paragraf nke mbụ na-ekwu nsogbu ma ọ bụ mkpa, ebe paragraf nke abụọ na-ekwu maka ihe omume. Banyere paragraf nke atọ, ọ na-enye ozi ndị ọzọ bara uru maka onye nnata.
Ekwesiri ighota, Otú ọ dị, na usoro nke akụkụ ahụ nwere ike ịdị iche. Ọ dabere n'ebumnobi nzikọrịta ozi nke onye zitere ma ọ bụ onye zitere ozi email.
Agbanyeghị, ma ọ bụ email ọkachamara ma ọ bụ leta, ọ dị mma ka ị ghara iji smileys. A na-atụkwa aro ka ị ghara imebi ụkpụrụ omume ọma dịka "Ezigbo" maka "Cdt" ma ọ bụ "Ekele" maka "Slt". N'agbanyeghị otú ị nọruo nso, ị ga-erite uru mgbe niile site n'ịbụ onye ọkachamara na ndị na-edekọ akwụkwọ ozi gị.
Wepụ iche email ọkachamara site na leta November 18th, 2021Tranquillus
gara agaIhe ndabere Microsoft Power BI maka ndị mbido
-esonụỌ ka mma izipu ozi-e ma ọ bụ karịa akwụkwọ ozi?
Ndepụta akwụkwọ ozi iji nabata ma ọ bụ jụ nguzozi na akaụntụ ọ bụla
Akwụkwọ ozi leta iji rịọ maka ịkwụ ụgwọ maka oge
Ọ ka mma izipu ozi-e ma ọ bụ karịa akwụkwọ ozi?
Template Email maka ihe